Aiwa. Mwari Baba vanofunga kuti ndiyo chete iyo minyengetero inogona kutaurwa. Icho chinonzwisiswa zvakare kuti Kristu anomira munzvimbo yekuyananisa pakati paMwari nevanhu (VaHebheru 7: 25). Minyengetero yose inowanikwa kuburikidza naKristu, kana muzita raKristu (John 16: 23-26).
Zvinotarisirwa kuti nhengo yese yechechi ichaungana kuti inamate pazuva reIshe. Chikamu chikuru chekunamatira ndiko kudya kwemanheru aShe (Mabasa 20: 7). Kunze kwekunge iwe uchidzivisa, mumwe nhengo anofunga nezvekugadzwa kwevhiki nevhiki sekusunga. Mune mamiriro mazhinji, semuenzaniso wekurwara, chirairo chaIshe chinotakurirwa kune avo vanodziviswa kuenda kune kunamata.
Somugumisiro wekumbiro kwakasiyana kwechechi - kudzokera kuTestamente Itsva Kutenda uye tsika - acappella kuimba ndiyo chete mimhanzi inoshandiswa pakunamata. Iri rwiyo, rusingabatanidzwi nemichina yemitambo yemimhanzi, rinoenderana nemimhanzi inoshandiswa muchechi yevaapostora uye kwemazana emakore akawanda pashure (VaEfeso 5: 19). Zvinonzwika kuti hapana simba rekuita mune zviito zvekunamata zvisingawanike muTesitamente Itsva. Iyi nheyo inopedza kushandiswa kwemimhanzi, pamwe chete nekushandiswa kwemashandisi, rusenzi, nezvimwe zvinhu zvakafanana.
Ehe. Mutsara waKristu muna Mateo 25, uye kune imwe nzvimbo, inotorwa zvakatarisana. Zvinotendwa kuti mushure mekufa munhu mumwe nomumwe anofanira kuuya pamberi paMwari mukutonga uye kuti achatongwa maererano nemabasa akaitwa paairarama (VaHebheru 9: 27). Mushure mokunge mutongi ataurwa achapedza nokusingaperi nokusingaperi kudenga kana mugehena.
Nha. Kushayikwa kwezvimwe zvirevo mumagwaro matsvene kune nzvimbo yenguva pfupi yekurangwa iyo mweya inotanga kusunungurwa kuenda kudenga inodzivisa kubvumirwa kwedziso yepurigatori.
Zuva roga roga rokutanga revhiki vese vekereke "vanovata nechechi sezvavanenge vachibudirira" (1 Corinthians 16: 2). Kuwanda kwechipi nechipi chipo chinowanzozivikanwa chete kune uyo akachipa uye kuna Ishe. Izvi zvisingabhadharwi-kupa chipo ndiyo chete inoshandiswa nechechi. HAPANA kuongorora kana zvimwe zvikwereti zvinoitwa. Hapana mabasa ekuita mari, akadai semashambaji kana kudya kwemanheru, anobatanidzwa. Zvose kana anenge madhora 200,000,000 anopiwa pane izvi gore negore.